Hifampidinihana amin’ny mpandraharaha mpivarotra solika eto amintsika izao ny momba ny vidin-tsolika mankany amin’ny mpanjifa. Miankina eo amin’ny vidiny iraisam-pirenena izy io sy amin’ny masonkarena hafa: fanadiovana, fitaterana, indrindra fa ny hetra isan-karazany. Koa tsy maintsy lanjalanjaina ny rehetra, hitsinjovana ny mpanjifa sy tsy hamono antoka ny mpandraharaha mpaninjara azy, araka ny fanazavan’ny minisiteran’ny Angovo sy ny akoranafo.
Tsy fandriampahalemana, faharatsian-dalana, tsy fahampian’ny angovo, fifaninanana maloto. Ireo, raha fintinina, ny manahirana ny orinasa maro eto Madagasikara. Niarahan’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina nidinika tamin’ny Vondron’ny orinasa eto Madagasikara (Gem) ny momba izany tamin’ity herinandro ity tao amin’ny Carlton. Mampihemotra ny mpampiasa vola ho avy eto amintsika ireo toe-javatra ireo, azo lazaina fa tsy zava-baovao intsony fa efa hatramin’ny taona maro. Fitondrana nifandimby maro koa no tsy nahavita nampandroso ny sehatra tsy miankina, tsy araka ny anaran’ny minisitera miahy azy.
Nisokatra, omaly, ny lalana Tsarasaotra–Ivato, mirefy 11 km. Izao vao vita ny lalana natomboka ny taona 2017 nandraisana ny fivoriamben’ny Frankofonia, saingy tsy vita hatramin’ny farany. Taty aoriana vao nahitana famatsiam-bola avy amin’ny Exim-Bank ny famitana azy ka voalaza fa efa voaloa ny 2/3 amin’ny tetibola 184 miliara nanaovana azy fa ny ambin’izany, tokony ho amin’izao fahavitan’ny asa izao. Heverina hanamaivana ny fitohanana eo Andranomena izany ny fahavitan’ity lalana ity.